Mpamatsy milina fampifangaroana zezika marindrano mora vidy | YiZheng
Inona ny masinina fampifangaroana zezika marindrano?
ny Masinina fampifangaroana zezika marindrano manana zana-kazo afovoany izay misy zorony amin'ny fomba samihafa izay toy ny kofehy vy mifono manodidina ilay hazo, ary afaka mivezivezy amin'ny lalana samihafa amin'ny fotoana iray, miantoka ny fifangaroana rehetra. Masinina fampifangaroana zezika marindrano afaka mandeha miaraka amin'ny fitaovana fanampiana hafa toy ny conveyor fehikibo na conveyor fehin-kibo ho an'ny tsipika famokarana zezika iray manontolo.
Ampiasaina inona ny Horizontal Fertilizer Mixer?
Ny fampifangaroana dia iray amin'ireo lahasa ilaina amin'ny tsipika famokarana zezika iray manontolo. Ary nyMasinina fampifangaroana zezika marindrano heverina ho fitaovana fototra sy mahomby amin'ny fampifangaroana granula maina, vovoka ary zavatra hafa manampy. Ny mixer zezika marindrano dia ampiasaina amin'ny fampifangaroana tsara ny fitaovana amin'ny fitaovana iray na maromaro fanampiny na additives hafa amin'ny fizotry ny famokarana zezika vovoka na ny fizotry ny famokarana zezika pellet.
Fampiharana milina fampifangaroana zezika marindrano
ny Masinina fampifangaroana zezika marindrano dia be mpampiasa amin'ny solid-solid (vovoka materialy) sy solid-fluid (vovoka materialy & fluidity materialy) mifangaro amin'ny sehatry ny indostrian'ny zezika, ny indostrian'ny simika, ny fivarotam-panafody, ny indostrian'ny sakafo, sns.
Tombony azo avy amin'ny masinina mixeur zezika marindrano
(1) Mavitrika avo: mihodina mihodina ary manipy fitaovana amin'ny zoro isan-karazany;
(2) Fanamiana avo lenta: ny famolavolana paikady sy ny vatan-kazo mihodina ho feno hoppera, ny fampifangaroana ny fitoviana hatramin'ny 99%;
(3) Sisa kely: Ny elanelana kely eo anelanelan'ny hazo sy rindrina ihany, lavaka fanariana karazana malalaka;
(4) Ny famolavolana manokana ny masinina dia mety handrava ihany koa fitaovana lehibe kokoa;
(5) Bika Aman'endrika: Fomba fanodinam-bolo sy fanosorana feno amin'ny fampifangaroana hopper.
Fampisehoana horonantsary fampifangaroana zezika marindrano
Safidy maodely mifangaro amin'ny zezika marindrano
Betsaka ireo Masinina fampifangaroana zezika marindrano modely, izay azo voafantina sy namboarina arakaraka ny filan'ny mpampiasa output. Ny masontsivana ara-teknika lehibe indrindra dia aseho eo amin'ny tabilao etsy ambany:
Teo aloha: Masinina mixeur zezika roa
Manaraka: Masinina mixeur disc